အုန်းနိုင် – ဂန္ဒီခန်းမကြေညာစာတမ်း (၁၀) | MoeMaKa Burmese News & Media
အုန်းနိုင် – ဂန္ဒီခန်းမကြေညာစာတမ်း (၁၀)
• ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အချို့ရဲ့ ပြန်ကြားချက်
နေ့လည်ပိုင်း အစည်းအဝေး ပြန်စတော့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ တင်ပြချက်များ အပေါ် ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကိုယ်စား၊
ဦးစိုးသိန်း(မောင်ဝံသ)က ပြန်လည်ဖြေကြား ရှင်းလင်းပါတယ်။အချုပ်ကတော့ ဒီနေ့ အဓိက အကျဆုံးဟာ အာဏာလွှဲပြောင်းရေး ဖြစ်တယ်။ဒါအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေး ပြေလည်ရမှာ ဖြစ်တယ်..။ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးရက်သတ်မှတ်တောင်းဆိုဖို့ နဝတနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို နဝတ က အချိန်ဆွဲနေပြီး အခုဒီက ပဏာမညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးလုပ်တော့မှ နတဝ က(၁/၉၀)ကိုကြေညာတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ ကြေညာချက်ပဲဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့က လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီလို သဘောထားနှစ်ခုဖြစ်နေလို့လည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ပိုပြီး လိုအပ်လာပါတယ်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတယ်ဆိုရာမှာလည်း တခြားပါတီလူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ရောပြီး ဆွေးနွေးတာက တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာ အများစုအနိုင်ရ တဲ့ ပါတီနဲ့ သီးခြားတွေ့ဆုံဖို့လုပ်ဆောင်သွားရမှာက တစ်ပိုင်းပါ။ပေါ်ထွန်းလာမယ့်လွှတ်တော်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို သာရေးဆွဲရမယ့် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်မဖြစ်စေရပဲ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သာဖြစ်စေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ အေးချမ်းစွာ လုပ်ဆောင်နေတာဟာ ရေခဲတုံးလို မဟုတ်ပါဘူး။ သံမဏိလုံး လိုဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ပြန်ကြားချက် ဒုတိယပိုင်းကတော့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အား လုပ်ပိုင်ခွင့် လွှဲအပ်ရေး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာလည်း (၁) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ (၂) လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးကိစ္စတွေအတွက် သာ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေ(ယာယီ) ဟာလည်းအာဏာလွှဲပြောင်းရေးအတွက် သာ ဖြစ်ပြီး ဒီအထဲမှာ လည်း ပြည်နယ်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စများပါ ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ လွှတ်တော်တစ်ရပ်ဘဲ ရှိဦးမှာပါ။ အားလုံးပါဝင်မဲ့ အမျိုးသား ညီလာခံကြီး ခေါ်ယူပြီး မှရေးဆွဲမဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကြီး ပေါ်ပေါက်လာမှ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုအသစ်ကြီး ဖြစ်လာမှာပါ။ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ မပေါ်မီ ကြားကာလမှာတော့ မာရှယ်လောကာလ ဘဲ ရှိနေဦးမယ်လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။
ဦးစိုးသိန်းလည်း ဒီလောက်ပြောဖို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စကားတွေကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ကိုးကားပြီး တော့ဖြေကြားပါတယ်။ (ပြီးမှ ကျနော်က နောက်မိသေးတယ်။ ဘယ်သူမျှတိုက်ကြည့်နိုင်တာမှ မဟုတ်ဘဲ ဆိုပြီး ရုတ်တန်း တွေ များလားကွာဆိုတော့ သူကဟာ—ဟုတ်ပါတယ် အစ်ကိုနိုင်ရဲ့ ဒီလို အစည်းအဝေးကြီးမျိုးမှာ ဘယ် ရုတ်တန်းလုပ်လို့ ဖြစ်မလဲ ပြန်ပြောတော့မှ.. ကျနော် နောက်တာ မှားသွားပြီ
ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ကျနော် နောက်တာက သူ့ကို နောက်တာပေမဲ့ ဒီအစည်းအဝေးကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။)
နောက် အစီအစဉ် ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များဟာ အမြဲပင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ ထိုင်မနေပါဘူး။ အခုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက်
ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ် ရေးထိုးရမဲ့ စာတစ်စောင်ရေးထားပါတယ်။
ဥပဒေကြောင်းအရ ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရားဝင် ရှေ့နေ အဖြစ် ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမှာမို့ ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းထားပါတယ်။ဥပဒေကြောင်း အရ ဆိုရင် ဆိုပြီး ဒေါ်စုကိုဖမ်းထားတဲ့ “နိုင်ငံတော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ” ရဲ့ ဘေးအန္တရာယ် မှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မက ဘာဆိုတယ်။ ဘယ်ပုဒ်မ အရ ဘယ်လို အယူခံ စစ်ရမယ်။ စသဖြင့်ဥပဒေ ပုဒ်မ တွေ အကြောင်း ရှင်းလင်းပါတယ်။ ဥပဒေ အရ တတ်နိုင်သလောက်လုပ်သလိုနိုင်ငံရေးအရလည်း အခု အစည်းအဝေး ကိုတက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများစုပေါင်းလက်မှတ်ထိုး အရေးဆိုမဲ့ စာကြမ်း ဆိုပြီး ဖတ်ပြပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ ဆိုတာ စာသားဘယ်လိုရေးထားထား၊ဘာကိုးကားချက်မှ ပါပါ မပါပါ အစကတည်းက လူတိုင်းက ဖြစ်စေချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လို့ ဘာမှ အငြင်းမပွားဘဲ အားလုံး လက်မှတ်ထိုးဘို့သဘောတူကြမှာပါ။ ဒါကို အဆောတလျင်မလုပ်လို့သာ ပြောနေရတာပါ။
နောက် အစီအစဉ်ကတော့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်မင်း(ဗိသုကာ) က လွှတ်တော်ကို ခေါ်ယူ ပေးရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးကို တက်လာတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၃၉၂)ဦး အဖွဲ့ချုပ်ပါတီခွဲ(၂) က ကိုယ်စားလှယ်(၄)ဦးတို့လက်မှတ်ရေးထိုးမဲ့ စာမူကြမ်းကို ဖတ်ပြပါတယ်။ ဒါက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကို လိပ်မူပြီး အကြောင်းအရာက “ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအခန်း(၂) ပုဒ်မ(၃) အရ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမြန်ခေါ်ယူရေးကိစ္စ”လို့ဆိုပါတယ်။
အပိုဒ် (၁) မှာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မေလ(၂၇) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက် ပွဲကြီးမှာအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များက လုံးလုံးလျားလျား အနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထင်ရှား နေပါပြီ။
အပိုဒ်(၂) မှာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ (၂၇) ရက်နေ့ က နဝတ ကထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်(၁/၉၀) မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့အညီ အရွေးခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းရေးကို နဝတ ကဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဖော်ပြတာကို ကြိုဆိုတယ်။
အပိုဒ်(၃)မှာ အခု ခေါ်ယူမဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဟာတိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် မဟုတ်ဘဲပြည်သူ့လွှတ်တော် သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အခန်း(၁) ပုဒ်မ ၂(က) မှာအတိအလင်း ဖော်ပြထားတယ်။
အပိုဒ်(၄) မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်ပြောကြားခဲ့တာကိုပြန်လည်ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကတော့ “ရေရှည် အကျိုးစီးပွားအတွက်မျှော်မှန်းလို့ ပြောစရာရှိရင်ပြောမယ်။ အခုတစ်မျိုး အခုတစ်မျိုး ဆိုရင်ကတိမတည်၊ ကတိမတည် လို့ ရှိရင် သံသယ စိတ်တွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုးတော့တပ်မတော် အနေနဲ့ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ တကယ်တော့ တပ်မတော် ဆိုတာဟာတိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာခံတာဘဲ။ အစိုးရဆိုတာကလည်း တိုင်းသူပြည်သား အများစုရဲ့ဆန္ဒအရ ရွေးချယ် တင်မြှောက်လို့ ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တပ်မတော်ဟာ အစိုးရအောင်မှာ ရှိရမယ်။ ဘာညာဒါတွေဟာ ဘာမှ ပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒို့တစ်တွေ ဒါတွေကို နားလည်ပြီးသားပဲ”။လို့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ(၉)ရက်နေ့က နဝတ နှင့် တဝတ ပဝတများညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
အပိုဒ်(၅)မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းတစိတ်တပိုင်းကို ထပ်မံဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်။“တချိန်က ရှေ့နေချုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးကနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ အရေးကြီးပုံနဲ့ အဓိက ကျပုံကိုပြောဆိုခဲ့တယ်။ တို့ရဲ့လက်ရှိ ရည်မှန်းချက်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲကိုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ကျင်းပရန်သာ ဖြစ်ပြီး ခုတင်က ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခြေခံဥပဒေ ကိစ္စကို မစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီကိစ္စကတို့အပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီကိစ္စက တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ တရားခံဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အခြေခံဥပဒေ အသစ်ကိုရေးချင်ရင်လည်း ရေးနိုင်တယ်။အဟောင်းကိုပြင်ပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း သုံးနိုင်တာပဲ။၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မေလ(၁၀)ရက်နေ့ တိုင်းမှူးတပ်မမှူး များနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ပြောကြားခဲ့တာကို (၁၁.၅.၉၀) နေ့ လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ်သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးမှာ ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ ကိုးကားထားပါတယ်။
စာပိုဒ်(၆)မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ရဲ့ စကားတွေဘဲထပ်မံကိုးကားပြီး “တစ်ချို့ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲက အဓိက မဟုတ်ဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကအဓိက လို့ ပြောတာလည်း ကြားရတယ်။ အစိုးရ အဖွဲ့ကို ယာယီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးပြီး အာဏာလွှဲ။ ပြီးတော့မှ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုအချိန်ယူရေးဆွဲရမယ်လို့လည်း ပြောတာ ကြားရတယ်။ ဒါကတော့ ကြိုက်တာလုပ်ကြပါ။တပ်မတော်အနေနဲ့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဘဲ ကတိ ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်တပ်မတော်ကတော့ ကိုယ့်ကတိအတိုင်းရွေးကောက်ပွဲက ပထမ လုပ်ရမှာမို့ အဓိကလို့ပြောချင်တယ်။(၄၅)ကြိမ်မြောက် တပ်မတော်နေ့မှ ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းကိုသတိထားမိပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အပိုဒ်(၇)ကတော့ အဲဒီလိုတွေ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ကပြောပြီးမှ (၂၇. ၇. ၉၀) နေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက် (၁/၉၀) ရဲ့အပိုဒ် (၂၀) ကျတော့ “ ထို့ကြောင့် ယနေ့အခြေအနေတွင် ပြည်သူများက ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော ကိုယ်စားလှယ်များသည် အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ရေးဆွဲ ကြရန် တာဝန်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။”… လို့ ဆိုပြန်ပါရော။နောက် ဒီ (၁/၉၀) ရဲ့ အပိုဒ် (၂၁) မှာဘဲ “ နိုင်ငံတော် အာဏာရယူရေး အတွက်ယာယီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲ၍ အစိုးရ ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမည်သည့်နည်း နှင့်မျှ လက်ခံမည်မဟုတ်သည့်အပြင် ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပါကဥပဒေနှင့် အညီ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း”။ ဆိုတာတွေ ပါနေတော့အထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ပြောထားတာက တစ်မျိုး၊ အခု(၂၇.၇.၉၀) နေ့ထုတ် (၁/၉၀) ကြေညာချက်က တစ်မျိုး ဖြစ်နေတာ ဖော်ပြထားပါတယ်။အပိုဒ်(၈) ကတော့ ဒီအစည်းအဝေးကြီးက ကိုယ်စားလှယ်ကြီး အများသဘောတူလက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုမဲ့ အဓိက စာပိုဒ်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။(က) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ အခန်း(၂) ပုဒ်မ (၃) အရ လွှတ်တော်
ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို (၁၉၉၀) ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလ အတွင်း ခေါ်ယူပေးရန်။(ခ) ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲခြင်း အတည်ပြုခြင်း၊ပြဌာန်းခြင်း သည် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ နှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း သာ ဖြစ်စေရန်။ကျွန်ုပ်တို့က လေးနက်တည်ကြည်စွာ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဆိုတာပါဘဲ။ သည်စာကို ဦးကျော်မင်း(ပိသုကာ) က ဖတ်ပြပြီးတဲ့နောက်၊နောက်အစီအစဉ်ကတော့ ဒီပဏာမ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကြီးက အားလုံး အတည်ပြုရမဲ့ဂန္ဒီခန်းမ၊ ကြေညာစာတမ်း ကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေကဖတ်ကြားပါတယ်။
ဂန္ဒီ ခန်းမ ကြေညာစာတမ်းမှာ စာပိုဒ် (၁၃) ပိုဒ်ပါပါတယ်။ အပိုဒ်(၁) မှာတော့ ဒီညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကြီးက ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး တညီတညွတ်ထဲ ဆုံးဖြတ်ကြေညာတာ ဖြစ်တယ်လို့နိဒါန်းချီလိုက်ပါတယ်။ အပိုဒ် (၂) မှာ (၁၉၉၀) ပြည့်နှစ် မေလ (၂၇) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ တပြည်လုံး မဲဆန္ဒနယ်(၄၈၅) နယ် အနက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပါတီခွဲ နှစ်ခုက စုစုပေါင်း (၃၉၆) နယ်မှာ အနိုင်ရခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီ ကျင့်ထုံးများ အရ ခိုင်မာတဲ့ အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကို အခိုင်အမာ ရရှိပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
အပိုဒ်(၃) မှာတော့ ဒီလို ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးသွားရင်အမြန်ဆုံး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ ဓမ္မတာ ဖြစ်သော်လည်း အခုရက်ခြောက်ဆယ်ရှိသည့်တိုင် မဖွဲ့စည်းရသေးပါ။ ဒါကြောင့် အနိုင်ရ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ လောလောဆယ်ဆယ် အကျိုးစီးပွား၊ အနာဂတ်အကျိုးစီးပွား၊ တွေကိုအခြေခံထားပြီး တမျိုးသားလုံး ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စိတ်ဓါတ်နဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဘက် စေတနာ အပြည့်အဝနဲ့ ပွင့်လင်း ရိုးသားစွာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြဖို့ နဝတ ကို အဆိုပြုထားပေမဲ့လည်း တစ်စုံတစ်ရာ ပြန်ကြားချက်မရှိတာကိုဖော်ပြပါတယ်။
နောက်တပိုဒ်ကတော့ တပြည်လုံးက ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးက လက်ရှိ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှု၊ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် နေရမှု၊ သောက ဗျာပါဒ တွေကင်းဝေးစေဖို့ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ် အမြန်ကူးပြောင်းရန် ဆန္ဒရှိနေတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
အပိုဒ် (၅) မှာတော့ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို အမြင့်ဆုံးမဏ္ဍိုင်အဖြစ်ထားရှိကြပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း ဒီမိုကရေစီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကြီး တစ်ရပ် ရှိမှသာ ကမ္ဘာက လေးစားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အပိုဒ်(၆) ကတော့ ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာမှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို ပြည်သူတွေက မဲပေးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့
ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကသာ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အခန်း(၂) ပုဒ်မ (၃) မှာပါတဲ့အတိုင်း လွှတ်တော် အမြန်ဆုံး ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းဖို့ လိုအပ်နေပါပြီလို့ပါရှိပါတယ်။ တဆက်တည်းဘဲ နောက်တပိုဒ်မှာ တာဝန်ရှိတဲ့ သူများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ရှိမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်ခေါ်ပေးဖို့မပျက်ကွက်သင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အပိုဒ်(၈) မှာတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ အခန်း(၁)ပုဒ်မ (၂)က အရ “လွှတ်တော်ဆိုသည်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ဆိုသည်”.. လို့ပြဌာန်းထားချက်အရ အခု ခေါ်ပေးရမဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဟာလည်း “တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် မဟုတ်ဘူး” ဟု အလေးအနက် ခံယူထားတဲ့ အပြင်အာဏာလွှဲပြောင်းရေးအတွက်လည်း အဖွဲ့ချုပ်က “ယာယီ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေ” တစ်ရပ်ရှိပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
အပိုဒ်(၉) မှာ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု သစ် အတွက်ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ တစ်ရပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်က သာလျှင် ရေးဆွဲရမှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် အဲဒီလို ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် က အခြားလိုအပ်သူများနဲ့ ကျယ်ပြန့်စွာညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားဘို့ကိုလည်း ခံယူပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ အာဏာစက် အရှိန်အဝါ မရှိဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအသစ်ကို အခြား ဘယ်နေရာမှာမှ ဆွဲဘို့ မသင့်လျော်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း လွှတ်တော်ကို အမြန်ဆုံးခေါ်ယူပေးဘို့ လိုအပ်ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
အပိုဒ်(၁၀) မှာတော့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီး မှဒီမိုကရေစီ အခွင်အရေးပေးရမယ်…။ အခု စစ်အစိုးရမို့ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး မပေးသေးဘူး ဆိုတာ သဘာဝ မကျပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဘို့ ပြည်သူက လုံလောက်တဲ့ မဲဆန္ဒပေးပြီး ပါပြီ။ ဒါကြောင့်အခုကတည်းက ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေ ကန့်သတ်မှုတွေ ပယ်ဖျက်ပေးပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အများစု ရရှိထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ကန့်သတ်မှုတွေ ရုတ်သိမ်းပေးပြီး အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းထားတာလည်းလွှတ်ပေးသင့်ပါပြီလို့ ပါပါတယ်။
အပိုဒ် (၁၁) ကတော့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။အခု အချိန်ဟာ တစ်ပါတီ စနစ်ကနေပြီး ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို
ကူးပြောင်းရမဲ့ အချိန်မို့လို့ စုပေါင်းဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရမဲ့ ပြဿနာအများအပြား ရှိနေဦးမယ် ဆိုတာ နားလည်ထားပါတယ်။ နဝတ နဲ့ အဖွဲ့ချုပ်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လေးလေးစားစားနဲ့ တမျိုးသားလုံး ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဦးတည်ပြီးရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလုပ်ကိုင်ရမဲ့ အချိန်တချိန် တော့ရှိရမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်မှာ
၁။ ပွင့်လင်း ရိုးသားမှုနဲ့ အပြန်အလှန် လေးစားလိုက်နာရေး မူ
၂။ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမူ
၃။ ငြိမ်းချမ်းချောမွေ့သော နည်းကို အသုံးချရေးမူ
၄။ အာဃာတ ကင်းစင်သော အထွေထွေ သဟဇာတ ဖြစ်မှုကို ရှေ့ရှုရေးမူ တို့ကိုကိုင်စွဲထားရမယ် လို့ ခံယူထားတာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
အပိုဒ်(၁၂) မှာတော့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းပေးဖို့ တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ဟာပြည်သူတို့ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး အခွင့်အရေးတစ်ရပ်မို့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အခန်း(၂) ပုဒ်မ(၃) အရ(၁၉၉၀) ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ခေါ်ယူပေးပါလို့တညီတညွတ်ထဲ တောင်းဆိုပါတယ်လို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဂန္ဒီခန်းမ ကြေညာ စာတမ်း မူရင်းကလည်း ညက်ညောလှတဲ့အပြင်..ဖတ်ပြတယ်ဆိုပေမဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ဦးခင်မောင်ဆွေရဲ့ဖြည့်စွက်တင်ပြချက်တွေကလည်း ပိုင်လှတာမို့ ဒီနှစ်ရက်စလုံး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့တင်ပြခံစားချက်တွေကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းတာတွေကြောင့် လက်ခုပ်သံမစဲ ဩဘာသံ မစဲ တက်ကြွ စွာဘဲ ပြီးသွားပါတယ်။
နောက် အစီအစဉ်ကတော့ ဒီအစည်းဝေး မှာ တင်သွင်း ဆုံးဖြတ်မဲ့ အဆို ငါးရပ်အတည်ပြုခြင်း ခြောက်ရပ်၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း တစ်ရပ်တို့ကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးလွင်က ဖတ်ကြားပြပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်မဲ့ အဆို ငါးရပ်ရဲ့ အတိုချုပ်ကတော့
၁။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူဖွဲ့စည်းပေးရန်
၂။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လုံးလုံးလျားလျား အများစု အနိုင်ရသော အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ် များတွေ့ဆုံးဆွေးနွေးရန်
၃။ နဝတ နှင့် အဖွဲ့ချုပ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် လိုအပ်သလိုလုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် ဗဟို ဦးစီးအဖွဲ့သို့
၄။ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန်။
၅။ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများ ရရှိရန် ပြည်သူ့လွတ်လပ်ခွင့်တားဆီးကန့်သတ်ထားမှုများကို ရုတ်သိမ်းပေးရန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အတည်ပြုခြင်း ခြောက်ရပ်ရဲ့ အတိုချုပ်ကတော့..
၁။ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့မှ ပထမ နေ့တင်သွင်းခဲ့သောနိုင်ငံရေး အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုမယ်။
၂။ အဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ် အဖွဲ့များနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆက်ဆံရေး လမ်းညွှန်ကို အတည်ပြုမယ်။
၃။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တားဆီးထားရာက လွှတ်ပေးဘို့ ကိုယ်စားလှယ်များကလက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုတဲ့ စာကို အတည်ပြုမယ်။
၄။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ယာယီ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ နဲ့စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုမယ်။
၅။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များက ၁၉၉၀ ပြည့် စက်တင်ဘာလ အတွင်းလွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးရန် လက်မှတ်ထိုး တင်ပြတဲ့ စာကို အတည်ပြုမယ်။
၆။ ဂန္ဒီ ခန်းမ ကြေညာစာတမ်းကို အတည်ပြုမယ်။ဆိုတာတွေပါဘဲ။
၁။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်(၁)က အရွေးခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြမောင် (၁၈.၆.၉၀) နေ့က ကွယ်လွန်သွားတာကို
ဝမ်းနည်းကြောင်းမှတ်တမ်းတင်တယ်။ဒါတွေကို ဦးလွင်က ဖတ်ကြားပြီးတဲ့နောက် သဘာပတိ ဦးကြည်မောင်ကအစည်းအဝေးကြီးရဲ့ အတည်ပြုချက် ကို ရယူကာ အစည်းအဝေးကြီးက တညီတညွတ်ထဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုံစံကတော့ မဆလ ခေတ်က အနှစ်သုံးဆယ်နီးနီးကျင့်သုံးခဲ့လို့ အသားကျနေတဲ့ ပုံစံပါ။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ် ၁၉၆၀ ခုနှစ်မတိုင်မီ ဒီမိုကရေစီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့တော့မတူပါ။
ပြီးတော့ အစည်းအဝေးကို ခဏရပ်ကာ ကိုယ်စားလှယ်များကို လဘက်ရည်နဲ့ဧည့်ခံပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်များ လက်မှတ်ထိုးရမဲ့ စာ နှစ်စောင်ကိုအခန်းအနားသဘာပတိ ဦးကြည်မောင်က လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ တစ်ဦးစီ သဘာပတိရှေ့စင်မြင့်ပေါ်ကို တက်ပြီး လက်မှတ်ထိုးကြပါတယ်။
ဒီနောက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်ရွှေက ဤအစည်းအဝေးကြီးအောင်မြင်အောင်အဘက်ဘက်က ကူညီကြတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းရော အဖွဲ့အစည်းလိုက်ပါ အသီးသီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောကြားပါတယ်။